Reniranon'i Ohio, 1933. BNL Ministries - mg63
Voalohany sy Faharoa Fisarihana.
Asan'ny Apostoly 26:13-15,
Tamin’ny 11 Jona 1933, rehefa nanao Batisa teo amin’ny renirano Ohio i Rahalahy Branham, tery amin’ny vodilàlana eo Spring Street tao Jeffersonville, dia nisy Hazàvana tsy fahita isan’andro, tahaka ny kintana, tonga tampoka nihodikodina nidina ary nihantona teo ambony lohany. Teo amin’ny 4000 teo ho eo ny olona nipetraka teo amoron’ny renirano nanatrika, maro tamin’izy ireo no vavolombelona nahita an’io tranga-javatra tsy azo hazavaina io. Ny sasany nitsoaka nohon’ny tahotra; ny sasany nandohalika nivavaka. Maro no nametra-panontaniana tao ampony ny dikan’io trangan-javatra tsy manampaharoa io. Tahaka an’i Saoly, nisy Feo niresaka avy amin’ny Hazàvana. Izao no teny voalaza, “Tahaka ny nanirahana an’i Jaona Mpanao Batisa hialoha làlana ny fiavian’ny Tompo voalohany, ny hafatrao dia hialoha làlana ny Fiaviany Fanindroany….”
Raha inoan’ny olona fa Andriamanitra dia nampiseho ny Tenany tamin’i Paoly tamin’ny Andry Afo, dia inona ary no manakana azy ireo tsy hino fa Andriamanitra dia afaka, ary nanao,ary namerina izany aty amin’ny taonjato faha-roapolo? Kanefa na dia tamin’ireo izay nampiasain’Andriamanitra mba hanamafy ny hafatra teo amin’ny vodi-làlana tao Spring Street aza, sy ireo teny tamin’ny teny tsy fantatra sy ny fandikan-teny, dia mbola ao ireo mandà fa ny Rahalahy Branham no mpialoha làlana miaraka amin’ny Hafatra (Message) alohan’ny hiavian’i Jesosy Kristy Tompo.
Na ny olona tao San Antonio, Texas, izay namerimberenan’Andriamanitra ireo teny ireo aza, “Tahaka ny nanirahina an’i Jaona Mpanao Batisa…” dia mandà ankehitriny. Tsy mahatoky izay nolazain’Andriamanitra azy ireo ny taona 1946, na koa lasa lavitra loatra izy ireo amin’ny teolojiany ka mihevitra izy fa afaka hovainy ny faminaniana tany amboalohany. Amin’ireo antony roa ireo dia diso izy ireo. Raha nirahin’Andriamanitra io lehilahy io miaraka amin’ny fanahin’i Elia mba hialoha làlana ny Fiaviany Fanindroany ary hanitsy ireo izay zavatra lasa tany amin’ny fombandràzana ka niala tamin’ny Tenin’Andriamanitra, ary raha mihazona ny Teniny Andriamanitra amin’io lehilahy io isaky ny milaza izy, “Izao no lazain’ny Tompo” dia tokony hiaino koa isika ny fampianarany.
Nadika sombiny avy... "Ny Asan’Ilay Mpaminany." Toko 6
Vakio ny kaonty feno in... "1933"
Fony aho nahita voalohany ny Rahalahy Branham, izany no dingana ny fanompoany; ny “Fisarihana”, izay efa naseho. Rehefa tonga teo anatrehany ny olona, raha tsy hitany ny aretina, toy ny fahajambana, rehefa ny kilemaina, na ny malemy, dia entiny amin’ny an-tànany, ary, raha tàhiny misy ota tao amin’ny fiainany, dia nilaza taminy ny fahotany aloha izy. Izany hoe, raha tsy efa nibebahana teo ambanin’ny ran’i Jesosy Kristy io ota io. Izy dia mampitandrina azy ireo: “Hibebaho ny fahotanareo alohan’ny andehananareo aty amiko.”
Demonia iray izay nantsoiny matetika dia mpifoka sigara - paraky. Niaiky izy tamin’izany andro izany, teo anatrehan’ny American Medical Association sy ny Sampan-draharahan’ny Fahasalamana, Fanabeazana, Fifanampiana sy ny Zava-mahadomelina, fa ny sigara mahatonga omamiadana. Afaka nahita ny fifandraisana, dia ny fanahin’izany zavatra izany izy, ka niampanga azy tamin’ny taona 1940. Izany dia talohan’ny tena nanombohan’ny vehivavy tena nanomboka nifoka sigara. Tamin’izany fotoana izany, tsy nahita vehivavy maro mifoka ianao. Tsy nahita dokam-barotra tao amin’ny gazety ianao momba ny vehivavy mifoka sigara. Fa taorian’ny nahazoan’ny orinasan’ny paraky ny lehilahy rehetra izay azony, dia nanomboka nanao izay hampalaza ny vehivavy hifoka sigara koa ry zareo, ary ankehitriny ny orinasan’ny sigara mihitsy aza no nahazo azy ireo amin’ny sigarabe sy ny fantsona (pipe). Izy ireo dia namporisika ny fanambaniana bebe kokoa ny vehivavy amin'ny alalan’ny fanaovana izany toa fireharehana sy zavatra toa mahafinaritra ho azy ireo ny misotro ary koa ny setroka. Ankehitriny ianao tsy hahita insony ny dokam-barotra mampiseho ny entana eo amin’ny orinasan’ny toaka raha tsy hoe misy vehivavy eo aminy.
Tahaka ny vehivavy niharatsy, dia tahaka izany ihany koa ny fiangonana izay niharatsy. Ny vehivavy dia oharina amin’ny Fiangonana. Tsy misy fomba mety hisakanan’ny olona izany. Ho tanteraka izany arak’izay voalazan’ilay anjely tamin’ny Rahalahy Branham ny 1946. Toy ilay anjely nanome torolalana an’i Paoly dia nitranga araka izay nolazaina tamin’i Paoly, toy izany no hatao amin'ny ity hafatr’ity anjely ity, satria tonga avy amin’Andriamanitra ho amin’ny mpaminanin’ity taranaka ity.
Ny famantarana faharoa, na “Sintona,” dia ny fahafantarany ny zava-miafina ao am-po. Izy dia afaka miresaka amin'ny olona fotsiny dia mahalala ny anarany sy ny momba azy ireo. (Tadidio fa ny Tenin’Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela, ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo.) Ny olona dia nanomboka nahita izany, ary niseho tamin’ny faramparan'ny taona 1950 sy ny fiandohan’ny taona 1960 tamin’ny asa fanompoan’i Rahalahy Branham. Nisesisy ny fahitana sy ny trangan-javatra ny faraparan’ny volana teo amin’ny fiainany izay nanambara ilay famantarana voalohany. Izany dia mba hamoaka ka hampiseho ny mpaka tahaka rehetra. Inona tokoa, ny sasany nivoaka niaraka tamin’izany eo amin'ny tanany ankavia, ny hafa eo amin’ny tànany ankavanana, ny sasany amin’ny mangorintsina eo amin’ny kiho, ny sasany miaraka amin’izany eo amin’ny hazondamosina, ary ny sasany dia mahatsapa izany eo amin’ny ny sofiny ankavanana.
Izany rehetra izany dia mba hampisehoana fa nisy tahaka an’i Jana sy Jambres na dia ao ity taranaka ity aza, satria izy ireo dia tonga amin'ny fitiavana harena maloto no nanaovany izany, ho fahazoam-bola izay tsy misy fiahiana ho an'ny olona, na ny Tenin'Andriamanitra, na ny lalan'ny fahamasinana. Lazainy fa sitrana ny olona rehetra, ka mitondra fandatsana eo amin'ny Tenin'Andriamanitra. Jesosy nanao hoe, “Tsy azoko atao na inona na inona afa-tsy ny nandidian ny Raiko Ahy.” Ny olona dia tonga tany amin’ny Rahalahy Branham ka nanao hoe: "Mivavaha ho ahy; Andriamanitra dia nanome anao ny fahefana." Dia hoy izy: "Eny, manana ny fahefana aho, fa tsy manana ny didy.” Izy tsy hanao izany na oviana na oviana mandra-pahatongan'ny fampisehon’Andriamanitra azy. Ary tsy nanao na inona na inona izy, raha tsy ny Ray no nampiseho azy. Hisaorana Andriamanitra noho ny iray izay mety hijanona miaraka amin'ny Teny.
Rehefa hanomboka ilay Sintona Faharoa nanomboka, mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, eto dia tonga vokatra vaovao ny evanjelista, ary izy ireo koa afaka hilaza aminao ny zava-miafina ao am-ponao ka hanao hoe: “Izao no lazain'i Jehovah.” Tsy misy toerana ahafahana nilaza izany rehetra izany, fa fahalalana feno, araka ny fampisehoanan’ny Fanahy Masina sy ny fahazavan'ny Tenin'Andriamanitra, dia hita ao amin'ny rakipeon’ny hafatry Rahalahy Branham “IreoVoahosotra amin'ny andro farany.” Izy io dia tena fanosorana'ny Fanahy Masina, fa fanaka diso izy ireo. Manontany ianao hoe aiza izany no ao amin'ny Soratra Masina? Matio 7 milaza fa hisy ireo izay manao hoe: “Tompo ô, Tompo ô, moa ve izahay tsy nandroaka demonia tamin'ny anaranao, ary nanangana ny maty, ary nanasitrana ny marary?” Fa, Jesosy namaly azy hoe: “Mialà amiko, ianareo mpanao ratsy, Tsy fantatro mihitsy ianareo.” Tonga ny olona izay nanao famantarana sy fahagagana, ary raha azo atao, dia hamitaka ny olom-boafidy. Nahoana? Satria nananany ny famantarana, nefa tsy manana ny Tenin'Andriamanitra mba hitondra ho amin'ny vatanan’ ny Ampakarina.
Rahalahy Branham dia nahita fahitana izay niezahany namatotra tadikiraro kely ny zazakely iray tamin'ny tady lehibe ary tsy afaka manao izany izy noho ny tady lehibe kokoa noho ny lavaky ny fehi-kiraro. Ao amin’ ny tapany faharoa amin’io fahitana io, dia misambotra trondro izy ary nanomboka nampiseho ny hafa ny fomba hahazoana trondro. Ny hevitr’izany taty aoriana ho azy dia midika hoe raha tonga aminy ny famantarana teny an-tànany dia niezaka nanazava izany tamin'ny olona izy. Ny Fanahin'ny Tompo niteny taminy ka nanao hoe: “Tsy afaka mampianatra zaza Pentekotista zava- mahagaga tsy azo hazavaina ianao.” Izany dia rehefa niezaka nampiseho ny mpitory hafa izy hanao toy izany zavatra nataony izany.
Nadika sombiny avy... "Ny Asan’Ilay Mpaminany." Toko 8
Vakio ny kaonty feno in... "Nipoitra ilay Anjely."